> Resource > Talooyin > Sida loo sameeyo Muqaal ah oo la Pan / Zoom Saamaynta
Saamayn Pan / Zoom waa farsamo si ay weli noqon images galay slideshow ah (ama film). Qarnigii la soo dhaafay, farsamo Pan Zoom ayaa waxaa si ballaadhan loogu daro filim documentary by documentarian American Kenneth Lauren Burns (Ken Burns). Tani waa meesha ay saamayn Ken Burns waxuu ka yimid. Maalmahan, aan toosan badan software video tafatirka loo isticmaali karo si loo gaadho Pan Zoom saamaynta si fudud, sida iMovie, Windows Movie Kan sameeyey, Pinnacle Studio, Sony Vegas, DVD Muqaal dhise, iwm, waayo, Windows ama Mac madal.
On madal Windows, Wondershare DVD Muqaal dhise daro gacanta wanaagsan ee digsiga iyo zoom muuqaalada. Waxaad ka dalban kartaa oo keliya ma aha saamaynta digsiga-zoom premade in mid ka mid click, laakiin sidoo kale qorshee gaar ah saamayn zoom digsiga. Waxaa loo yaqaan Customize Motion. Hoos waxaa ku qoran tusaale ah slideshow la saamaynta Pan Zoom - browser HTML5 loo baahan yahay.
Sorry, biraawsarkaaga ma taageeri slideshow HTML5 .
Hel 50 + saamaynta zoom digsiga u slideshow hadda.
Isticmaal Saamaynta horena Pan Zoom
DVD Muqaal dhise waxaa ka mid ah in ka badan 50 dhisay-in arrimo slideshow zoom digsiga. In mid ka mid click, weli sanamyadiinna ku nool yihiin ilaa goobtii. By badhanka random, ayaa sidoo kale ku siin image kasta panning gaar ah iyo qaabka zooming.
Habee Pan Zoom Saamaynta
Si loo siiyo in ka badan tii digsiga iyo zoom customizations, isticmaal ' Customize Pan Zoom 'feature in ay gacanta ku badan image animations. In sidaa la yeelo, xaq guji image ah oo taga si Motion > Customize Motion si ay u muujiyaan ilaa zoom tafatirka daaqadaha digsiga sida hoos.
Sida aad arki karto, waxaa jira bilowga iyo dhamaadka daaqadaha labada dhinac. Sheeg booska, baaxadda iyo warejin, siday u kala horreeyaan. Ka dibna waxaad si deg deg ah ku eegaan laga yaabaa inuu adiga ku gaar ah saamayn zoom digsiga.
Halkan sida ay u astaysto slideshow saamayn zoom digsiga:
Si digsiga : jiidi tiirarkii dhigay jagooyinka kala duwan ee labada daaqadaha.
Si Mozilla : resize image by gacanta ee afar geeska ah ee image.
Si aad isku shaandheyn : mouse ka badan badhanka ee xarunta of image, iyo jiidi marka icon double-fallaadh u muuqataa.
An digsiga saamayn zoom representive icon ka muuqan doontaa thumbnail sawir ku storyboard markii saamayn zoom digsiga slideshow lagu darayaa in sawir.
Marka la soo koobo, samaynta digsiga slideshow zoom la DVD Slideshow Builder Deluxe waa mid aad u fudud. Marka aad ku faraxsan tahay oo aad slideshow, waxaad badbaadin karin sida file video ah oo lagu ciyaaro kombiyuutarka ama qalab, ama si toos ah u shidin DVD si uu u daawado digsiga slideshow zoom sawir on TV. Hayso isku day ah.